Into ekufuneka uyazi ngeSintering-News-VSmile Co., ltd
OKUFUNEKA Ukwazi NgokuSintering
Ixesha: 2021-06-23 I ngxelo:27
Njengomboniso wamazinyo e-zirconia manufaturer, umsebenzi wethu unxulunyaniswa nokuntywila, nolu uluhlu lwemibuzo ephezulu ye-10 esiyifumana rhoqo malunga nokususa i-zirconia kubathengi bethu.
Umbuzo: Ngaba izithsaba zirconia zinokuchukumisa kancinci xa zingena eziko okanye kufuneka kubekho indawo phakathi kwazo?
A: Kufanele kubekho indawo encinci phakathi kwabo. Yile nto isicebisa ukuba siyenze kwaye yile nto siyenzayo kwi-CMC. Ngamanye amaxesha ngexesha lomjikelo wokuntywila, izithsaba ziya kuqengqeleka kwaye zichukumisane, kodwa khange sibe nayo imiba yokuba bachukumise ukuza kuthi ga ngoku ngokomgangatho.
Q: Uziva njani malunga neetreyini ezingenamakhanda?
A: Ndivavanyile kwaye zisebenza kakuhle. Iitreyi ezinamaso kwaye ngaphandle komsebenzi ngokulinganayo.
Q: Ndiqaphele kwimanyuwali yesithando samazinyo ukuba bacebisa ukutshintsha izinto emva kweeyure ezingama-2000. Ngaba uyayenza loo nto?
A: Sityhale ii-oveni zethu ixesha elide kunoko kwaye iziphumo zethu zisalungile. Ke ukuba uyazithanda iziphumo ozifumanayo emva koko ulungile. Ukuba iziphumo ziqala ukonakala ndiza kuqala ukujonga izinto zam. Ukwakhiwa kwi-MoSi2 kucacile, kwaye kuyacaca ukuba iyaqhekeka / yaphuka.
Umbuzo: Kwiziko lomlilo kukho umjikelo wokulinganisela owenziwe kwangaphambili okanye ungaya kwindlela yokulinganisa kwakhona?
A: Kukho inkqubo elungiselelwe kwangaphambili kwi-Sintra Plus. Ungayijonga inkqubo kwaye ucinezele 'ukungena' okanye ucofe 'utshintshe inkqubo' ukuyitshintsha. Umjikelo wokucoca okucetyiswayo: yi-25C ukuya kwi-1600, yigcine iiyure ezingama-4, isantya sobushushu phantsi kwama-25C ukuya kuma-350, kunye nokuphola kwendalo emva koko.
Umbuzo: Ndicinga ngokuthenga inkqubo yokugaya. Ngaba ukubekwa kwe-oint sintering kubalulekile? Umzekelo, umoya, icompressor, njl.
A: Akukho vumba okanye nayiphi na into eyityhefu ekhutshwe kwii-oveni ke asiyidingi umoya wokungenisa umoya okanye ihood. Sigcina ii-oveni zethu zokucoca kwindawo esecaleni, silumkile ukuba kungabikho nto inokutsha ngaphakathi kwabo, kwaye i-oveni nganye ifakwe kumthombo wayo wamandla.
Umbuzo: Singazisonga iiyunithi ezingatshatanga kunye neeyunithi ezi-6 okanye ezinkulu ngexesha elinye?
A: Ewe. Soloko usebenzisa inkqubo yebhulorho enkulu. Ayizukuchaphazela iyunithi enye.
Q: Ngaba usebenzisa umjikelo weyure ezi-4? Sisasebenzisa imijikelezo yobusuku ~ 9hr, ngaba singafezekisa umgangatho ofanayo okanye ophantse ufane nomjikelo weyure ezi-4? Senza ikakhulu iiyunithi ezingatshatanga kunye neebhlorho ezincinci.
A: Sivavanye umjikelo weyure ye-4 kwi-zirconia amaxesha amaninzi, kwaye iziphumo zilungile. Sisasebenzisa umjikelo weyure ye-7-8 ngokuyintloko kuba uninzi lokuntywila kwethu kwenzeka ebusuku.
Q: Kwi-Sintra Plus, loluphi ulondolozo olucebisayo? Siyazi ukuba kufuneka siqhube imijikelezo yokucoca, kodwa asiqinisekanga ukuba yeyiphi imijikelezo yokucoca oza kuyisebenzisa, kufuneka ithathe ixesha elingakanani, kwaye uyenza kangaphi?
A: Kuxhomekeke kwilebhu yakho. Ndingacebisa ukuba ndiqale kube kanye ngeveki. Sebenzisa ubushushu ukuya kwi-1600 kwaye ubambe ukuya kwiiyure ezi-4 kwaye upholile. Yongeza i-zirconia yakho emhlophe etreyini. Ukuba loo diski ibuyela ezantsi imhlophe ngokupheleleyo uyazi ukuba awunazo izinto ezingcolisayo apho phezulu. Ukuba ihla phantsi ibala kwaye ndiyathanda ukubaleka omnye umjikelo ndide ndibone idiski imhlophe.
Q: Uyakusebenzisa ukupholisa komoya (iityhubhu zomoya eziza nazo)? Ngaba loo nto ikuvumela nje ukuba uphole ngokukhawuleza kwaye uthathe iiyunithi ngokukhawuleza?
A: Asisebenzisi ukupholisa umoya. Asikukhuthazi ukwenza oku kuba sikholelwa ekubeni kungonakalisa umgangatho weyunithi.
Q: Ngaba ubushushu begumbi buyayichaphazela i-oveni yokuntywila? Ngaba umgangatho wesithsaba wawuza kuba sengozini?
A: Ewe, ngokuqinisekileyo. Sibalekele kule ngxaki okwethutyana. Sazigcina ii-oveni kwigumbi elingaphantsi kweedigri ezingama-50 kwaye i-oveni yayingafudumezi kakuhle. Ndingacebisa ukuba kugcinwe i-oveni kwigumbi elingaphezulu kwama-50 degrees.
I-PREV: I-RESET RESIN - Into ekufuneka uyazi
OKULANDELAYO : Ukucoca kunye nokuGqibezela iVsmile yangaphakathi ye-UT Multilayer
Umatshini weVsmile wamazinyo weCADCAM
Vsmile HappyZir UT I-Multilayer yeZirconia iBhloko
Vsmile HappyZir STML Multilayer Zirconia Block Iyahambelana neAmann Girrbach Cam System